हरेक महिला लागि वस्त्र धेरै महत्त्वपूर्ण र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। केही मानिसहरू व्यावहारिक वस्त्र, कसैले रुचि - एक शैली वा स्थिति जोड, र केही महिलाहरु भीड तिनीहरूलाई जारी, उज्ज्वल र flashy पोशाकहरू चयन गर्नुहोस्। तर जे outfit, यो लगभग सधैं स्वेटर छ।
को आकार कसरी निर्धारण
क्रममा जैकेट आकार ठीक चयन गर्नुपर्छ बेफाइदा कौशलतासाथ लुकाउने र सक्रिय जोड यसका लाभ, "एक आंकडा मा" ब्लाउज बसे। हरेक महिला उपयुक्त लुगा मा बिताउनुहुन्छ कि समय कम गर्न, त्यहाँ एक सारांश तालिका आकार, सधैं उद्धार आउन जो छ। तिनीहरूले पनि त्यहाँ उपयुक्त छ किनभने सधैं सम्भव छ, अनलाइन सपिङ्ग मार्फत लुगा आदेश गर्दा मदत।
तालिका औसतमा आयाम जैकेट दिइनेछ। कि मात्रा भनिने आंकडा छ, तपाईं सुरक्षित एक जोडी सेन्टिमिटर को, conversely, दूर लिन थप्न सक्नुहुन्छ, वा। हामी ब्लाउज, स्वेटर, स्वेटर, ब्लाउज र टी। ई बारेमा कुरा गर्दै भने, मुख्य माप बस्ट र कमर छन्।
जैकेट को ठूलो आकार:
लुगा त्यस आवश्यक ठीक आकार निर्दिष्ट उत्पादनहरू हुनेछ याद गर्नुहोस्। बस सेन्टिमिटर उचाई त्यहाँ लेखिएको गर्न सकिएन। यो सूचक अनुसार पनि एक ज्याकेट टिप्न सजिलो हुन सक्छ।
सबै मापदण्डहरु महत्त्वपूर्ण छन्
हामी अनलाइन लुगा आदेश बारेमा कुरा गर्दै भने, त्यसपछि त्यहाँ केही सरल नियमहरू छन्। धेरै साइटहरु आयाम जैकेट वास्तविक मानक आकार संग एकै समयमा पर्नु छैन। यो विदेशी साइटहरू, चिनियाँ अनलाइन वस्त्र स्टोर को विशेष गरी साँचो हो। तपाईं सही लुगा र "सही" चयन गर्न आफ्नो शरीर मापन गर्न सक्छन्, तर वास्तवमा यो उपयुक्त छैन भनेर बाहिर जान्छ।
विशेषज्ञहरु सकेसम्म धेरै माप गर्न सल्लाह। महिला आकार जैकेट पनि रूसी निर्माताहरु फरक हुन सक्छ, पश्चिमी स्टोर को केही भन्न। त्यसैले, साइट मात्र वृद्धि भएको थियो भने पनि, अझै पनि मापन को कमर परिधि को छाती र विक्रेता यो जानकारी पठाउन। नियम, तिनीहरूले सधैं ग्राहकहरु संग एक rapprochement जाने, दायाँ आकार कसरी चयन गर्न र गलत हुँदैन व्याख्या।
हामी मात्र कुरा भने रूसी आकार जैकेट, तिनीहरूले सधैं poluobhvatu छाती द्वारा निर्धारित छन्। तर विशेषज्ञहरु पूर्ण छाती मापन गर्न सल्लाह र त्यसपछि आधा मा विभाजन। त्यसैले हामी सही सूचक प्राप्त। उदाहरणका लागि, मंडल एक सय सेन्टिमिटर बराबर छ। तसर्थ, हामी तिनीहरूलाई आधा विभाजन र पचासवां आकार प्राप्त।
कसरी आकार गणना गर्न
निस्सन्देह, धेरै राम्रो, यदि तपाईंको सबै सेटिङहरू र एक आकार आंकडा तल तालिकामा मापन दृष्टिकोण। तर यो छाती तपाईं 48 girth कि हुन्छ, तर अन्य मापदण्डहरु (जांघों, कमर) - मात्र 44 यस मामला मा के गर्ने? ठूलो, तर प्यान्ट वा स्कर्ट - - सानो छ त यो जैकेट कि बाहिर जान्छ। सम्झना, आफ्नो मिशन जहाँ वस्त्र, खुला बस्न हुँदैन - विपरित एक शरीर पट्टा गर्न, र।
अक्सर, यस्तो आंकडा संग महिलाहरु गर्दा पोशाक छनौट समस्याको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। एक ज्याकेट र विभिन्न आकार को एक स्कर्ट किन्न भने - एक समस्या, त्यसपछि ड्रेस - सधैं सँगसँगै केहि। आदेश वा एक आकार ठूलो किन्न र सही ठाउँमा लिन कुरा सी गर्न: त्यहाँ केवल दुई विकल्प छन्।
खुला फिर्ता पोशाक लागि ब्रा: चयन गर्न कसरी
इतिहास र रोचक nuances बारेमा अलि: आफ्नो घाँटी वरिपरि रूमाल कसरी बाँध गर्न।
दक्षिण कोरिया को राजधानी: आउनुहोस्, तपाईं पछुताउनु छैन!
Stringed झुके साधन: समूह को विवरण
यदि नवजातको कब्जना छ भने आमाबाबुले के गर्नुपर्छ?
Chrysolite संग कान को बाली। chrysolite संग चाँदी र सुन गरगहना
Datsun ("AvtoVAZ"): निर्दिष्टीकरण, समीक्षा, मूल्यहरू र फोटोहरू
सही विज्ञान - तिनीहरूले के हुन्
"महान् प्लाजा Hurghada होटल4*": समीक्षा, फोटो